पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको एमसीसीको सम्वन्धमा यस्तो आयो स्टाटस « Post Khabar
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको एमसीसीको सम्वन्धमा यस्तो आयो स्टाटस
प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०७८, शनिबार १८:२१
रास्ट्रका नेतामा आत्मभरोसा भयो भने अरु शक्ति रास्ट्रसंङ्ग कुरागर्न सक्ने रहेछ्न। तर जहाँ ब्यापारी बुद्धिजीवी छ्न, जहाँ बुद्धिजीवीको जागीरकोलागि बुद्धि लिलाम गर्छ, त्यांहा रास्ट्रको स्वार्थ होइन बिदेशीको चाकरी हुन्छ।
१.श्रीलंकामा राजापाक्क्ष (रास्ट्रपति)ले बिज्ञहरुको समूह बनाएर एम सि सि को अध्यन गराए। त्यो स्म्मुहले संझौता रास्ट्रको हीतमा छैन भन्यो। राजपाक्क्षले भने संझौता संसदबाट पारीत हुँदैन। तर अहिले सम्म पनि अमेरिकी अधिकारीहरु भ्रमण गर्दैछ्न र फकाइ रहेका छ्न। तेस्ता मापदण्ड पासगर्नु पर्ने नियम भएको यो लगानी लिन्न भन्दा किन फकाइरहनु पर्ने?
२. नामिबिया लामो लंडाइबाट स्वतन्त्र बनेको देश हो। उनिहरुले बार्ता र छल्फल गर्ने जानेका रहेछ्न।त्यांहाको कम्प्याक्टमा परीयोजना कार्यन्वयन गर्ने निकाय सरकारको योजना आयोग छ। सबै निर्णय यस्ले गर्छ। एम सि सि अमेरीकाले अनुगमन मात्र गर्छ। यदि यो संझौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको हो भने,
१. बिद्वानहरु सरकारलाई अधिनमा राख्ने एम सि ए नेपाल किन चाहियो? संझौतामा योजना आयोगलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय बनाउन किन दिनु भएन परामर्शदाताहरु? किनकि १९ अर्बको सफ्ट परियोजनाबाट यहाँहरुलाई लाभ चाहीएको छ, होइन र?
२. किन नेपालको कानुन भन्दा संझौता माथीहुनु पर्यो, किनभने सरकारको सहमति बिनानै संझौता हेरफेर गर्न पाइन्छ। यो नबुझी गर्नु भएको छ?
३. यो संझौता जानेर नै यस्तो बनाइयो। मित्रहरु यस्को अध्यन गर्न नामिबियाको संझौता पनि पढ्नु होस। हल्ला होइन तर्क गर्न सिक्नु होस। सभ्य कुरा गर्न सिक्नु होस।